Kunamata Points Yekubudirira muWAEC Kuongorora | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Minyengetero Yekubudirira muWaEC Kuongorora
Minyengetero Yekubudirira muWaEC Kuongorora
Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoinzi ekubudirira muWAEC kuongorora. Iri gwaro rekunamatira rakanangana nevadzidzi vari kugadzirira kunyora bvunzo. Iyo West Africa Examination Council bvunzo ndechimwe chezvinhu zvinodiwa kuti ubvumirwe kupinda musangano wepamusoro.
Nguva zhinji, vadzidzi vanonyatso gadzirira bvunzo zvekuti vanokanganwa nzvimbo yekunamatira. Bhaibheri rinoti mubhuku ra Varoma 9:16 saka zvino hazvisi zveunoda, kana unomhanya, asi zvaMwari unonzwira tsitsi. Panogara paine kudikanwa kweminamato yakakwana kana uchinyora bvunzo. Isu takanzwa nyaya dzevadzidzi vachinyora bvunzo kwemakore mazhinji uye vasina kuwana budiriro, ino ndiyo nzvimbo yekunamatira.
Zvichakadaro, izvi hazvireve kuti vadzidzi havafanirwe kuverenga zvakare pavanonamata, kuverenga nekunamata zvinofambidzana kuona kuti kubudirira kweWAEC bvunzo kunovimbiswa. Muchirongwa ichi chekunamatira, tichave tichijekesa matipi mashoma ayo vadzidzi vangateedzere kuti vabudirire pabvunzo yavo yeWAEC
Matipi Ekudarika WAEC Zvakanakisa
Dzidza Iyo WAEC Syllabus
Iyo WAEC syllabus ine ese mabasa akaitwa mugore. Mibvunzo yekuongorora inogara ichatorwa kubva muiyi syllabus. Musimboti wekudzidza syllabus ndeye kudzikisa kushushikana kwevadzidzi nekuvapa ruzivo pane nzvimbo dzekuverengera bvunzo.
Kazhinji pane zvisiri izvo, dambudziko harisi nekuti vadzidzi vakatadza kudzidza, imhaka yekuti vakadzidza zvisizvo. Iyo syllabus ichapa vadzidzi gwara pavanoda kuverengera bvunzo.
Wana Nguva Yekufunda
Apa ndipo pane nhema basa. Vadzidzi vanofanirwa kuona kuti vanowana nguva yekudzidza nekudzidza zvakanyanya kuoma. Kune chirevo chakakurumbira chinoenda zvakadaro, gadziriro chaiyo inodzivirira kuita kwetsvina. Kunyanya kudzidza kwevadzidzi, ivo vanova nani.
Vazhinji vadzidzi vari kushuvira kunyora bvunzo kazhinji vanowira pasi pousimbe tsika yekufunda uye ndicho chikonzero chiri kumashure kwekutadza kuzhinji.
Bhadhara Rapt Kutarisisa Kune Mirayiridzo
Pane mutsetse mutete pakati pekuziva mhinduro chaiyo nekupindura nemazvo. Isu takaona kuti dzimwe nguva hazvisi zvekuti vadzidzi havazive mhinduro kumubvunzo, dambudziko nderekuti havana kutora nguva yekufunda mirairo kuti vazive kuti mhinduro ichawanikwa sei.
Vadzidzi vanorayirwa kuti vasamhanye kupindura mibvunzo iyo yavanokanganwa kuverenga iwo mirairo zvakanaka vasati vapa mhinduro.
Dzivisa Kuongorora Kwakashata
Kana iwe ukatadza, kana zvirinani iwe unokundikana zvine rukudzo pane zvinonyadzisa. Ichi chikonzero nei zvakakosha kuti udzivise mhando dzese dzeongororo zvisizvo. Vadzidzi vari kushuvira kunyora bvunzo vanofanirwa kuona kuti vane giya raIshe uye vanoteerera vakagadzwa masimba.
Pasina account vadzidzi vanofanirwa kupinda muhoro yekuongorora nechero mhando yechip inovaita kuti vafunge uye kubvarura mufananidzo wavo nevabereki vavo. Vana vaMwari havabiridziri uye vanopasa zvine mutsindo.
Kumbira Mwari Kuti Akubatsire
Bhuku reMapisarema rinoti ndichasimudza meso angu kumakomo kubva kwachabve rubatsiro rwangu, rubatsiro rwangu ruchabva kunaIshe muiti wedenga nenyika. Zvakanaka kuverenga nekudzidza nesimba, zvakakoshawo kuchema kuna Mwari kuti ubatsirwe. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti nesimba hakuna munhu achakunda. Izvi zvinoreva kuti simba remurume harina kukwana zvakakwana kuti ribudirire.
Nepo vadzidzi vakadzidza nesimba, zvichiri kukosha kwavari kuti vacheme kuna Mwari kuti vabatsirwe kuita kugona kukuru mukuongorora kwavo.
Rugwaro runoti mubhuku ra Jakobho 1: 5 Kana mumwe wenyu achishaiwa njere, ngaakumbire kuna Mwari, unopavhurira vose asingagunun'uni; uye uchapiwa hake. Kune vanhu vane dambudziko harisi rekuti vanga vasina nguva yekuverenga kana ivo vasina kuverenga zvachose. Rimwe dambudziko revanhu kukanganwa. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti Mwari chete ndiye Anopa Huchenjeri kumunhu asina mhosva
Kunyangwe mushure mekugadzirira kwakakodzera kwatoitwa kare usati waongororwa, vadzidzi vanofanirwa kukumbira Mwari njere kuti vanzwisise pavanodzidza, nyasha dzekuzviratidza pachavo nerunako muhoro yekuongorora.
Ndinoraira nesimba rematenga, paunotanga kushandisa gwara remunamato, budiriro yakatanhamara mukuongorora kweWAEC ndicho chikamu chako muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione nhasi, baba ini zuva ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu.
Ishe, ndinokutendai nezuva rangu rekutanga kuchikoro chesekondari. Ndinokutendai nedziviriro yenyu pamusoro pehupenyu hwangu, ndinokutendai nehungwaru, ruzivo uye kunzwisisa kwamakandipa mukufamba kwese uku, Ishe ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu
Ishe Jesu, ndinoisa ongororo yangu yeWAEC mumaoko enyu anokwanisa, ndinonamata kuti muchandiropafadza nekubudirira muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira huchenjeri, ruzivo uye kunzwisisa kubva kumusoro, ndinonamata kuti mundipe kwandiri muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinoraira nesimba rematenga kuti pandinoverenga nekudzidza sekugadzirira bvunzo, muchandipa nyasha dzekubata zvinhu nekukurumidza muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti kunyangwe muimba yekubvunzurudza, mundipe nyasha yekuzvitaura zvizere muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndapota ndipeiwo nyasha kuti ive chaiyo mukutsanangurwa kwangu. Ini ndinopesana nemweya wemistakes pakuongorora kwangu, ngazvipiswe nemoto muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundipe nyasha yekurangarira zvese zvandakaverenga nemazvo muzita raJesu. Ini ndinopesana nemweya wese wekukanganwa muzita raJesu.
Ndinonamata kuti mweya mutsvene waMwari umutse muviri wangu unofa kuti usakanganwe. Nyasha dzekurangarira zvinhu nemazvo, ndinonamata kuti zviuye pandiri izvozvi muzita raJesu.
Rugwaro runoti hatina kupihwa mweya wekutya asi wehumwanakomana kuchema Ahba baba. Ishe handiparadzwe nekutya muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndauya kuzopesana nemweya wekutadza kutenderera uchinditenderedza mukuongorora uku, ngaupiswe nemoto muzita raJesu.
Ndinonamatira nyasha dzaIshe Wamasimba Ose. Nyasha netsitsi dzaMwari dzinozotanga kutaura pamusoro pangu pakaguma zivo yangu yekufa, ndinonamata kuti nyasha dzakadai dziwanikwe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Points YeKunyanyisa Nyasha
inoteveraKunamata Points Yekubudirira muJamb Kuongorora
Mapisarema 18 Zvinorehwa Ndima neNdima
Kunamata Kunongedzera Kudzorera kumashure
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 7th November 2018
Pfungwa dzeMunamato Kune Vashandi MuChechi
Pfungwa makumi matatu Eminamato Yekutenda Ino Fambisa Makomo